Izindaba - Amandla aphezulu
Izibophelelo zamandla aphezulu
Izici eziphakeme zamandla aphezulu
Izibalo zamandla aphezulu ziyi-class 8.8, Class 9.8, class 10.9, class 12.9 fasteners. Amandla aphezulu we-fasteners abonakala ngobulukhuni obuphezulu, ukusebenza okuhle kwesimo, ukusebenza kahle kwemishini, ukuqina okuphezulu kokuxhumana, ukusebenza okuhle kokuzamazama komhlaba, nokwakhiwa okulula nokusheshayo.
Izibophelelo zamandla aphezulu zivame ukwenziwa ngezinto zokwakha
I-SCM435 ne-1045ACR 10B38 40Cr ingenza amazinga we-10.9 no-12.9. Ngokuvamile, imakethe ye-SCM435 ingenza amazinga angaphezu kuka-10.9 no-12.9.
1. Ama-bolts: Isigaba sama-fasteners anezingxenye ezimbili, ikhanda nesikulufa (isilinda ngentambo yangaphandle), okuzofanela kuhambisane ne-nati yokuqinisa nokuxhuma izingxenye ezimbili ngembobo. Lolu hlobo lokuxhuma lubizwa ngokuthi ukuxhuma kwe-bolt. Uma i-nati ingasuswanga kusuka kubhulothi, lezo zingxenye ezimbili zingahlukaniswa, ngakho-ke ukuxhumana kwe-bolt ukuxhumana okungatholakali.
2. Stud: Isigaba se-fasteners ngaphandle kwekhanda futhi sinemicu yangaphandle kuphela emikhawulweni yomibili. Lapho ixhunyiwe, enye ingxenye yocingo olukhulu lwe-auger kufanele ifakwe engxenyeni yomgodi wangaphakathi ohlanganisiwe, bese enye leyo ngxenye inomgodi, ucingo olukhulu lwenethiwekhi kufanele lube lushelela kwi-nati, noma ngabe okubili izingxenye ziboshwe kanyekanye. Lolu hlobo lokuxhumana lubizwa ngokuthi ukuxhumana nge-Stud futhi luxhumeka futhi. Esetshenziselwa enye yezingxenye ezixhunyiwe ngobukhulu obukhulu, isakhiwo se-compact, noma ngenxa yama-disassembly kaningi, ayilungele izikhathi zokuxhuma ezixhumekile.
3. Izikulufo: Kubuye kube uhlobo lwe-fastener lwakhiwe ngekhanda nesikulufa. Ngokwenhloso, zingahlukaniswa izinhlobo ezintathu: ama-screws omshini, ama-screws okulungiswa kanye nama-screws akhethekile enhloso. Isikulufa somshini sisetshenziselwa ingxenye yengxenye yomgodi ongaguquki, futhi ukuxhumana okusheshayo phakathi kwengxenye ngomgodi akudingi i-nut fit (lolu hlobo lokuxhuma lubizwa ngokuthi i-screw uxhumano futhi lingelokuxhumeka okungasebenzi; lungakwazi ibuye ifakwe nge-nati yokuqinisa ngokushesha phakathi kwezingxenye ezimbili ngezigxobo. Isikulufa sokusetha sisetshenziselwa ikakhulukazi ukulungisa isimo esilinganiselwe phakathi kwezingxenye ezimbili.
4. Amantongomane: anezimbobo ezinezintambo zangaphakathi, imvamisa ngesimo sekholomu ye-hexagonal, kodwa futhi ngesimo sekholomu yesikwele noma isicaba esicwebezelayo, esinama-bolts, izikopelo noma isikulufa somshini, esetshenziselwa ukusheshisa nokuxhuma izingxenye ezimbili ukuze ukuthi baba lilonke.
Isikhathi sokuthumela: Jun-28-2020